Shabakada Somaliska.com oo xarun rasmi ah furatay | Somaliska
Bahda shabakada Somaliska.com ayaa xafiis rasmi ah ka furtay magaalada Fagersta ee gobolka Västmanland. Xaruntaan ayaa noqon doonta xarun waxbarasho isla markaana ka shaqeyn doonta horumarinta arimaha isdhexgalka ayaa hawsheeda waxay si toos ah u bilaabeysaa isbuucaan.
Xarunta cusub ayaa loogu magac daray New Progress Center (Xarunta horumarka cusub) taasoo magaceeda muujinayo heerka sare ee aan higsaneyno taasoo ah in bulshada Soomaaliyeed laga caawiyo sidii ay horumar uga sameyn lahaayeen dalkaan Sweden iyadoo loo marayo waxbarasho iyo wacyi galin.
Xarunta ayaa noqon doonta xafiis rasmi ah oo loogu soo hagaago bogga Somaliska.com oo hada noqday isha ugu weyn ee wararka Soomaalida Sweden. Xarunta ayaa sidoo kale waxay bixin doontaa koorsooyin waxbarasho oo kor loogu qaadayo heerka bulshada kuwaasoo isugu jira Luuqada Swedishka, Teoriga körkortka iyo koorsooyinka kombutarada.
Waxaan sidoo kale ugu bishaareyneynaa akhristayaasha ku xiran Somaliska ee kala jooga daafaha Sweden in xaruntu ay furi doonto Iskuul Online ah oo aad si toos ah ula socon doontaan koorsooyinka ka bixi doona xarunta NPC. Iskuulkaan ayaa noqon doona mid aad ku baran doontaan Teoriga körkortka iyo luuqada Swedishka adiga oo gurigaaga jooga.
Faahfaahinta ku saabsan iskuulka Onlineka ayaan dib ka soo qori doonaa.
Telefoonada iyo adreeska xarunta ayaan ku soo daabici doonaa Qaybta Contactu-us ee Somaliska.com waqti dhow. Haddii eebe idmo.
Xafladii furitaanka Xarunta ayaa waxaa lagu qabtay tarmo aad u xiiso badan sida cunto afka lagu cunayo iyo kuraas lagu tartamayo. DAAWO SAWIRADA.
Waad ku mahadsan tahay saaxiib Jimcaale Waana soo dhawaynaynaa waxaana ku leenahay ILLAAHAY hakula garab galo aad waxaan u xiisaynayaa arinta teoriga körkortka waana ku mahad san tahay in badan
July 4, 2011 at 08:48
Run ahaantii waa howl wanaagsan waxaana u rajeynayaa Somaliska.com iyo xaruntan cusub ee NPC guul iyo horumar.
Wexey ilatahay runti howshan waa hol waxku ool ah palse somalida swdan iyo saxbken jimcale howsheni qarabada waxad moda in lagacajisay oo.2013ka ey udhacday
Masha;Allaah waa talaabo harumareed.
Aaadbeey inoo farxad gelinee , arintaan waana mid tilmaamee Hiigsiga somaliska in uu sareeyo.
Waxaan Mustaqbal dhaw idin rajaynaa in aad laamo badan yeelan doontaan isha’Allah
July 4, 2011 at 16:31
waa ari aad faxad uleh mashaa alaah walaal walaal waxaan ku weydinayaa
tiyonika iyo shorka luqada somaaliga maad noogu soo dabaceesaan mise swedeshka
mashaa allh waa arin lagu farxo heerka aad kor ugu qaden wabsedka somaliska.com aad ayaan uso dhaweyna horamarka wanagsan ee aad sameysen jimcale waxan ku rajeyna qeer badan adiga iyo inta isku xilqaday howshan iney qabtan
Aad ayaad u mahadsantihiin inta fikradaha ku darsatay halkaan. Kayfo suaashaada haddaan ka jawaabo, iskuulka aan fureyna casharo la soo daabacayo keliya ma noqon doono ee wuxuu noqon doonaa iskuul dhameystiran oo si LIVE ah oo muuqaal ah aad casharada ula socon doontaan isla markaana aad akhrisan doontaan casharka maalinkasta iyo suaalaha. Casharada waxaa lagu sharixi doonaa Soomaaliga/Swedishka iyadoo ardada la fahansiino suaalaha iyo erayada muhiimka ah ee Swedishka oo ardadu ay u baahanyihiin in ay imtixaanka ku baasaan.
Faahfaahinta guud ee ku saabsan iskuulka onlineka waqti aan fogeyn ayaan soo daabici doonaa. Insha Allah
a.s dhamaan aqyaarta , tan kale waxan u hambalyeynayaa somaliska.com hormarka ay ku talaabsatay
kolley waa arin hada kohorna naga maqneed hadana aad iyo aad baan oogu faraxsannahay hadii aan nahay shicibka amam somalida reer faqashta wellcm jamcaalle